Voasazy Higadra Herintaona Noho Ny ‘Fitarihana Fihetsiketsehana,’ Nitokona Tsy Hihinan-kanina Ilay Mpanao Gazety Maraokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2017 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, Français, 繁體中文, عربي, Ελληνικά, English
Mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny a sit-in tao Imzouren, 14km miala ny tanànan'i Al-Hoceima ao amin'ny faritra Rif. Sary avy amin'i AlhoceimasOfficiel. Nahazoana alalana.
Niditra fitokonana tsy hihinan-kanina ilay mpanao gazety Maraokana Hamid El Mahdoui taorian'ny nampitomboin'ny fitsaràna ambony ho herintaona ny saziny an-tranomaizina.
Vao maraimben'ny 12 Septambra sy taorian'ny fitsarana naharitra sivy ora mahery, namoaka didim-pitsarana nampitombo ny sazin'i El Mahdaoui ho herintaona raha telo volana tany am-boalohany ny fitsarana ambony any Al Hoiceima, noho ny fanaovana kabary izay nolazain'izy ireo fa nitarika ny hafa hanao fihetsiketsehana sy hanitsakitsaka lalàna eo ambanin'ny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny firenena.
El Mahdoui no tale sady tonian'ny famoahana ao amin'ny tranonkalam-baovao tsy miankina Badil.info. Nosamborin'ny manampahefana Maraokana tao amin'ny faritr'i Rif izy tamin'ny 20 Jolay, raha handeha hanangom-baovao ny fihetsiketsehana, ary voaheloka ho nandrisika fihetsiketsehana avy eo.
Ny porofo fototra voalohany nampiasana hanamelohana azy dia ny lahatsary tamin'ny 19 jolay nalain'ny polisy iray izay voalaza fa mampiseho an'i Mahdaoui mitarika ny olona handray anjara amin'ny hetsi-panoherana 20 Jolay teo izay efa noraràn'ny manampahefana Maraokana tany am-boalohany.
Hiantohan'ny lalàmpanorenana Maraokana sy ny Lalàna momba ny Fivoriam-bahoaka ny zo hanao hetsi-panoherana sy fivoriana. Tsy notakiana tamin'ireo mpikarakara ny fametrahana fangatahana fahazoan,-dalana mialoha, saingy tokony hampahafantatra ny manampahefana momba ny toerana, ny fotoana sy ny daty hanaovana ny hetsi-panoherana izy ireo. Na dia izany aza, afaka mandràra fihetsiketsehana ny manampahefana raha mihevitra izy ireo fa mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka izany.
Taorian'ny nanambarana ny didim-pitsarana tamin'ny 12 septambra, nanapa-kevitra hanohy ny fitokonana tsy hihinan-kanina i Mahdoui mba hanoherana ny fitsarana tsy ara-drariny sy ny fanitsakitsahana ny zony amin'ny fahalalaham-pitenenana, hoy ny vadiny, Bouchra El Khounchafi tamin'ny vaovaon'ny HuffPost.
Voahozongozon'ny fihetsiketsehana i Al Hoceima sy ireo tanàna hafa ao amin'ny faritra Rif hatramin'ny nahafatesan'ilay mpivarotra trondro Houcine Fekri tamin'ny volana Oktobra lasa teo. Maty voahitsaky ny kamiao mpitondra fako i Mohsin Fekri raha saika hisambotra ny trondrony, izay nalain'ny manampahefana an-keriny teo an-toerana. Nanjary lasa “Hirak” na hetsika ho an'ny asa sy ny fampandrosoana ara-toekarena, sy manohitra ny fanilikilihana sy ny kolikoly ny hetsi-panoherana nanomboka teo. Ho setrin'izany, nampiasa famoretana ny manampahefana Maraokana, nisambotra ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpikatroka ary nanasazy tati-baovao miresaka fihetsiketsehana.
El Mahdaoui niresaka tamin'ny lahatsary momba ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana tao El Hoceima. Loharano: Pikantsary avy amin'ny lahatsary nakarina tao amin'ny fantsona YouTube an'ilay mpanao gazety tamin'ny 28 Jona.
Nilaza ireo vondrona mpiaro zon'olombelona ao an-toerana sy iraisampirenena fa tsy nitarika hanao fihetsiketsehana i Mahdoui, fa naneho fotsiny ny fomba fijeriny momba ny fandraràn'ny governemanta ny hetsi-panoherana tamin'ny 20 Jolay raha nanakana azy ireo mpandalo nahita azy ary nanomboka nifampiresaka taminy momba ny Hirak.
Nanadihady ny lahatsary sy namaky ny rakitsoratra nampiasaina ho porofon'ny fitsarana an'i Mahdoui ny Mpanaramaso ny Zon'Olombelona:
Araka ny fandraketan'ilay lahatsary, nanakiana ny fanapahan-kevitry ny governemanta handràra ny hetsi-panoherana 20 Jolay i Mahdaoui , ka nilaza hoe: “Zontsika ny manao hetsi-panoherana amin'ny fomba milamina sy mandroso; (…) Nampijaliana sy natao tsinotsinona aho, zoko ny maneho hevitra sy manao fihetsiketsehana. “
Nijery ny lahatsary ny Human Rights Watch ary namaky ny rakitsoratra ka tsy nahita na inona na inona ahitana fitarihana mivantana avy amin'i Mahdaoui ho an'ny hafa mba handray anjara amin'ny hetsi-panoherana voaràra tamin'ny 20 Jolay. Nilaza i Hajji, mpisolovava fa tsy nanome porofo hafa ankoatra ny lahatsary sy ny rakitsoratra ny fitsarana.
Miresaka lohahevitra samihafa ao Maraoka ny tranonkala tsy miankina an'i Mahdaoui, Badil.info, anisan'izany ny politika, ny zon'olombelona sy ny kolikoly, ary nitatitra momba ny fihetsiketsehana tao amin'ny faritra Rif.
Fantatra amin'ny tsikerany mivantana antserasera amin'ny manampahefana Maraokana ihany koa i Mahdaoui. Manana mpanjohy maherin'ny 97.000 izy ao amin'ny fantsona Youtube izay hanehoany hevitra momba ny toe-draharaha politika sy zon'olombelona ao Maraoka. Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, nahitana tafatafa tamin'ireo mpikatroka zo sy fianakavian'ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina, ary lahatsary mampiseho ny herisetran'ny polisy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana Hirak ao El Hoceima sy Rabat ireo lahatsary navoaka tao amin'ny fantsony. Tamin'ny 25 Jona, namoaka ny antsafa nifanaovana tamin'ny ray aman-drenin'ny mpitarika ny hetsika, Nasser Zafzafi, izay efa nigadra hatramin'ny 29 Mey, taorian'ny baikon'ny mpampanoa lalàna hisambotra azy noho ny fanapahany toriteny Zoma manohana ny fanjakana, lahateny izay mitsikera ny fihetsiketsehana i Mahdoui.
Tsy vao voalohany izao ny manampahefana Maraokana no nanenjika an'i Mahdaoui noho ny asany amin'ny maha-mpanao gazety na amin'ny fanehoany hevitra. Araka ny voalazan'ny Reporters Without Borders, “niharan'ny dingana ara-pitsarana folo samihafa izy farafahakeliny, anisan'izany ny hetsika fanalam-baraka”. Tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity, nametraka fitoriana momba ny fanalam-baraka nataon'i Mahdaoui ny minisitry ny atitany ao Maraoka rehefa namoaka lahatsary miampanga azy tamin'ny kolikoly ity mpanao gazety ity.
Tamin'ny 29 Jona 2015, nanameloka azy higadra efa-bolana, sazy mihantona, onitra 6.000 Dirhams Maraokana (640 USD) ary nandidy azy handoa 10 000 Dirhams (eo ho eo amin'ny 1070 USD) ho an'ny filohan'ny Foiben'ny Fiarovam-pirenena ny fitsarana ao Casablanca, noho ireo tatitra navoakany tao amin'ny Badil mikasika ilay mpikatroka ara-politika Karim Lachqar, izay maty nandritra ny fitazonan'ny polisy azy.
Tamin'ny volana Aogositra 2015, nandidy ny hanakatonana ny Badil mandritra ny telo volana sy nampandòa onitra an'i Mahdoui 30,000 Dirhams (3 200 USD) noho ny famoahana tatitra momba ny fipoahana baomba tanaty fiara tao an-tanàna ny fitsarana heloka bevava ao an-tanànan'i Meknes. Nolavin'ny governemanta taty aoriany ny tatitry ny fampahalalam-baovao momba ny fipoahana.
Na dia nilaza aza ny governemanta Maraokana fa tsy mifandraika amin'ny asany amin'ny maha-mpanao gazety azy ny fisamborana an'i Mahdoui, mpanao gazety maromaro hafa koa no efa niharan'ny herisetra na nosamborin'ny manampahefana Maraokana noho ny fitantarana hetsi-panoherana tao amin'ny faritra Rif. Teo anelanelan'ny 26 May sy 22 Jolay, nandrakitra fisamborana mpanao gazety olo-tsotra sy mpiasan'ny fampahalalam-baovao fito noho ny fitantaran'izy ireo ny Hirak ny Reporters Sans Frontieres. Nandroaka mpanao gazety vahiny izay nitatitra ny hetsi-panoherana ihany koa i Maraoka, anisan'izany ireo mpanao gazety Espaniola roa miasa ao amin'ny El Correo Diplomatico sy ilay mpanao gazety Alzeriana miasa ao amin'ny gazety miteny Frantsay El-Watan ao Algers.
Amin'ny fampitomboana avo efatra heny ny sazy am-ponjan'i Mahdoui, nampiseho ny manampahefana Maraokana fa tsy te hampitsahatra ny famoretana ny fampahalalam-baovao sy tsy hampisy tontolo azo antoka ho an'ny mpanao gazety amin'ny fanaovana ny asany ao anatin'ny korontana any amin'ny faritr'i Rif. Mandritra izany, manohy ny fitokonany tsy hihinan-kanina ilay mpanao gazety.
Arabia Saodita 4 andro izay
Israely 6 andro izay